सञ्चालनमा आउँदै उपत्यकाका विद्यालय — Raranews.com
काठमाडौँ, माघ ४ गते । काठमाडौँ उपत्यकामा माघ पहिलो सातादेखि भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालनमा आउने भएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सङ्क्रमण कम हुँदै गएको तथा सरकारले समेत चालू शैक्षिक सत्रलाई सदुपयोग गर्ने तयारी गरेअनुसार माघ पहिलो सातादेखि सबै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डेले सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा हट्न अझै नसकेको अवस्थामा सावधानीपूर्वक विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । विद्यार्थी–शिक्षक सबैले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
सामाजिक दूरी कायम गरेर पठनपाठन अगाडि बढाउनुपर्ने र यसमा हेलचेक्र्याइँ गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो । विद्यालयको शौचालयबाट सङ्क्रमण सर्ने सबैभन्दा बढी जोखिम भएकाले यसमा सबै चनाखो हुनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. पाण्डे बताउनुहुन्छ ।